Tantaran'i Oganda - Wikipedia
Ny tantaran' i Oganda dia voamariky ny fisian' ny fanjakana efatra tany aloha, ny fahatongavan' ny Eorôpeana, ny fanjanahan-tany britanika, ny fahaleovan-tena, ny fanoganam-panjakana, ny fifampitsabahana amin' ny raharahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fahasarotana amin' ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
1 Talohan'ny fahaleovan-tena
1.1 Ireo fanjaka-mpanjaka tany aloha
1.2 Ny fanjanahan-tany britanika
2 Taorian'ny fanjanahan-tany
2.1 Ny nahazoana ny fahaleovan-tena
2.2 Ireo filoham-pirenena voalohany
2.2.1 Ny fitondran'i Milton Obote
2.2.2 Ny didy jadona tamin' ny fitondran' i Idi Amin Dada
2.2.3 Yusuf Lule sy Godfrey Binaisa
2.2.4 Fiverenan'i Milton Obote teo amin'ny fitondrana
2.3 Ny fitondran'i Yoweri Museveni
2.3.1 Fanavaozana ara-pôlitika sy fanitsiana ara-toekarena
2.3.2 Fahalaniana fanindroany
2.3.3 Ny fidirana an-tsehatry ny miaramila tany amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô
2.3.4 Fihenjanan'ny fitondrana sy fiharatsian'ny fandriam-pahalemana
2.3.5 Fahalanian'i Yoweri Museveni mifanesy sy fangejana ny fanoherana
Ireo fanjaka-mpanjaka tany alohaHanova
Fanjaka-mpanjaka efatra no nipoiran’i Oganda ka nanamafy ny fifandrafiana teo amin’ ny samy Eorôpeana talohan’ ny hanolorana azy amin’ ny Britaina Lehibe tamin’ny taona 1890.
Ny fanjakan'i Boganda
Nisy fitaovana vita amin’ny vato tao amin’ny tendro ihaonan’ ny renirano Congo sy Nily, aty aorian’ ny farihy Edward, vavolombelon’ ny nisian’ ny olombelona voalohany tany amin’ny 1 500 000 taona lasa. Tamin’ ny fiantombohan’ ny fanisa-taona iraisana dia nahasarika mpamboly banto sy mpiompy nilôtika ny faritry ny Farihy Lehibe amin’ ny fananany toetany antonony sy tany lonaka. Ireo vondron’ olona roa ireo, izay tsy nitovy fiteny, dia tsy niara-nonina, nefa nisy ihany ny fifanakalozana fomba fiaina sy kolontsaina. I Boinôrô (Buynoro) izay fanjakà-mpanjaka lehibe voalohany dia niorina tamin’ ny taonjato faha-15. Tamin'ny taonjato faha-16 sy faha6-17 dia nahazo ny ampahany be tamin’ny faritra afovoany ao Oganda ny tafik'io fanjakana io.
Tamin’ny fiafaran’ny taonjato faha-17 dia nikorontana vokatry ny fisian’ny ady maro ny fanjakana Boniôrô, ka nanambara ny fahaleovan-tenan'ny faritra nofeheziny ny governoran’ny faritanin’i Boganda (Buganda). Ity fanjakana vaovao ity, izay voaron’ny tafika baikoin’ny mpanjaka mivantana, dia lasa nanana ny maha izy azy haingana tao amin’ireo fanjakana manodidina azy. Na dia teo izany heriny izany dia tsy afaka nanjakazaka tanteraka tamin’ireo fanjakana hafa, toy ny fanjakan'i Ankôle (Ankole) na Nkôle (Nkole) sy ny Tôrô (Toro) izay afaka tamin'ny fangejan'ny Boinôrô, ny fanjakan'i Boganda.
Ny fanjanahan-tany britanikaHanova
Ireo mpahita tany britanika izay nitady ny loharanon’i Nily no Eorôpeana voalohany niditra tao Oganda. Ny mpanjaka Mutesa I, izay nanjaka teo anelanelan’ny taona 1852 sy 1884, dia nandray an’i John Hanning Speke, avy eo nandray an'i Henry Morton Stanley izay nikasa ny hitory ny Filazantsara (na Evanjely) tao amin’io fanjakana io. Tamin’ny taona 1879 no nahatongavan’ny misiônera voalohany tao Boganda.
Folo taona latsaka taty aoriana dia nanjakan’ny ady an-trano io faritra io. I Britaina Lehibe, mpifanandrina tamin'i Alemaina tao Afrika Atsinanana dia nisahirana amin’ny fiarovana ity tany mpifanila vodirindrina amin’i Kenia ity tsy ho azon’i Egipta sy ny finoana silamo. Noho izany dia niditra an-tsehatra ny Britanika mba hampitsahatra izany ady izany. Nosoniavin’i Mwanga (zanak’i Mutesa I) ny fifanarahana amin’ny maha ambany fiarovana (prôtektôrata) ny taniny. Nentin’ny Britanika ny tafik’i Boganda mba hamabo ny fanjaka-mpanjaka manodidina. Vokatr’izany dia niitatra ka nahafaoka ny fanjakan’i Tôrô sy ny an’i Ankôle ny prôtektôrata. Nanana ny sata mifehy azy manokana i Boganda, izay efa nandray ny finoana kristiana tany aloha, ka nanana fandaminana ara-pôlitika azy manokana, fa ireo fanjakana hafa dia voazanaka amin’ny fomba mivantana kokoa.
Tsy nahasarika mpiavy firy ny faritr’i Oganda izay nanjakan’ny aretin’ny torimaso (aretina afindran’ny lalitra tsetse) sy ny tazomoka, nefa nandroso ny fambolena ary niforona ny vondron’ny tambanivohitra nanan-katao. Tamin’izany fotoana izany dia tonga niaraka tamin’ny fametrahana ny lalam-by tao Afrika Atsinanana ny Indiana hanamboatra azy izay niorim-ponenana mba hisahana raharaham-barotra rehefa vita ny lalam-by. Ny rafitra niainan’i Boganda dia nitohy hatra aty aorian’ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny nahazoana ny fahaleovan-tenaHanova
Nanomboka tamin’ny taona 1945 dia nihamahery vaika ny fitakiana ny fahaleovan-tena tao Boganda izay niseho teo anelanelan’ny Ady Lehibe roa. Tamin’ny taona 1953 dia nitaky hahazo fahaleovan-tena manokana ny mpanjaka Mutesa II ka natao sesitany tany Lôndra (na Lôndôna) mandritra ny telo taona.
Tamin’ny taona 1962 dia niafara amin’ny fahazoan’i Oganda fahaleovan-tena ny fifampiraharahana lava natao. Nisy anefa ny olana momba ny rafitra ara-pôlitika hifanarahana. Ny vahaolana noraiketina tao amin’ny lalàm-panorenana voalohany, izay manaraka ny rafitra federaly (fizakan-tena isam-paritra), dia nanambatra ireo fanjakà-mpanjaka efatra teo aloha, nefa nihazona ny lanjany manokana i Boganda (Buganda) ka hita izany ao amin’ny anaran’ny fanjakana vaovao, dia i Oganda (Uganda) tanin’ny Baganda (foko ao Oganda).
Ny mpajaka Mutesa II dia lasa filoham-pirenena mandra-pahafatiny. I Milton Obote, mpanorina ny antoko Uganda People’s Congress (UPC) tamin’ny taona 1960, no lasa piraiminisitra. Ny UPC no antoko pôlitikan’ny vahoaka nilôtika any avaratra, izay nanohitra ny fanjakazakana ara-teokarena sy ara-pôlitikan’i Boganda, ka nankasitraka ny fivangongoam-pahefana. Nanomboka tamin’izay dia nitombo ny disadisa teo amin’ny Avaratra nilôtika izay betsaka Prôtestanta sy Silamo, sy ny Atsimo banto izay betsaka Katôlika.
Ireo filoham-pirenena voalohanyHanova
Ny fitondran'i Milton OboteHanova
Milton Obote, taona 1960.
Tamin’ny volana Mey 1966, mba hanamafisana ny fivangongoam-pahefana, dia nandefa ny tafika tao Boganda ka nanaisotra tamin’ny toerany ny mpanjaka i Milton Obote. Nanampy an’i Milton Obote tamin’izany ny lehiben’ny etamazôro Idi Amin Dada, izay isan’ny foko madinika silamo vitsy an’isa ao avaratra andrefana. Tamin’ny taona 1967 i Milton Obote dia namoaka lalàm-panorenana vaovao, izay nanafoana ny fanjakà-mpanjaka sy nanorina fitondrana ananan’ny filoham-pirenena fahefana lehibe ary nandidy ny fisian’ny antoko pôlitika tokana.
Nihozongozona ny fitondran’i Milton Obote vokatry ny fanoheran’ny Boganda, izay voatohintohina tombontsoa noho ny nanaovan’i Milton Obote ho fananam-pirenena ny raharaham-barotra, sy vokatry ny fitontonganan’ny toekarena ary ny fiampangana azy ho mpanao kolikoly.
Ny didy jadona tamin' ny fitondran' i Idi Amin DadaHanova
Idi Amin Dada taona 1973.
Tamin’ny volana Janoary 1971 dia nanararaotra ny tsy maha eo an’i Milton Obote i Idi Amin Dada ka naka ny fitondrana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana. Nanohana azy i Etazonia sy i Britaina Lehibe ary i Israely. Nampitomboiny ny isan’ny miaramila, nofoanany ireo antoko mpanohitra, nampanjakainy ny fampihorohoroana, na teo amin’ny Boganda izany na teo amin’ny vahoaka nilôtika. Manodidina ny 200 000 ny olona matiny. Tamin’ny taona 1972 dia noroahiny ny Aziatika miisa 100 000 any ho any (ny 50 000 dia Indô-Pakistaney) izay nampangainy ho mpanjakazaka ara-toekarena, satria ny ankamaroan ’izy ireo dia mpandraharaha varotra. Tamin’ ny taona 1978 dia saika banky ropitra i Oganda ka niankin-doha tamin’ ny trosa nomen’ ireo firenena miozolmàna mpankasitraka an’i Idi Amin Dada.
Nitaky ny faritra ao Tanzania manamorona ny sisin-tany manasaraka an’i Oganda amin’io firenena io i Amin Dada ka naniraka ny tafika ogandey hanani-bohitra tamin’ny volana Novambra 1978. Nahatonga an’i Tanzania hiditra an-tsehatra amin’ny ady izany. Nandositra tany Libia sy tany Arabia Saodita nahafatsany amin’ny taona 2003 i Amin Dada.
Yusuf Lule sy Godfrey BinaisaHanova
Nanendry an'i Yusufu Lule ho filoham-pirenena mpisolo toerana vonjimaka manomboka amin'ny 13 Avrily 1979 ny Uganda National Liberation Front ( UNLF), nefa nesorina indray izy tamin'ny 20 Jona 1979 satria nolazaina fa mpanao didy jadona sy tsy nahay namerina ny filaminana. Notendrena ho filoham-pirenena mpisolo-tena vonjimaka koa i Godfrey Binaisa hisolo an'i Yusuf Lule. Nesoriny ny lohandohany iray tao amin'ny tafika ka nesorin'ny tafika koa izy tamin'ny 12 Mey 1980.
Fiverenan'i Milton Obote teo amin'ny fitondranaHanova
Nanamora ny fametrahana indray fitondrana sivily ny filoham-pirenena tanzaniana Julius Nyerere. Nitohy anefa ny korontana ka taorian’ny fifadimbiasan’ny filoham-pirenena telo (Amin Dada sy Yusuf Lule ary Godfrey Binaisa) vao tafaverina teo amin’ny fitondrana indray i Milton Obote tamin’ny fifidianana nandraisan’ny antoko UPC anjara tamin’ny volana Desambra 1980. Nitsotsorika ambany dia ambany ny toekaren’i Oganda vokatry ny fandroahana ireo Indiana mpandraharaha varotra, ka nihoatra ny 200 % ny fiakaran’ny vidim-piainana sady nisy mosary nahafaty olona betsaka tao amin’ny faritr’i Karamojong ao Avaratra. Rehefa nody ny tafika tanzaniana tamin’ny taona 1981 dia tratran’ny famaizina mafy ny mpanohitra. Niisa 100 000 any ho any ny Ogandey maty novonoina sy matin’ny mosary.
Roa loha ny mpanohitra an’i Milton Obote, dia ireo miaramila mpanao vy very ny ainy (kômandô) tsy niala amin’i Amin Dada tao Avaratra, sy ny National Resistance Army (NRA) tao Bangada Atsimo izay notarihin’i Yoweri Museveni (voaofana tany Tanzania sy Môzambika). Teo anivon’ny tafik'i Oganda dia nisy ny fanoherana hafa rehefa avy nanome ny andraikitra tsara indrindra ara-pôlitika sy ara-miaramila ny olona tao amin’ny foko misy azy (ny Langô) i Milton Oboe.
Tamin’ny taona 1985 dia nanongam-panjakana ny jeneraly Tito Okello avy any Avratra ao amin’ny foko nilôtika ato hoe Asôly (Acholi) ka nahafaka an’i Milton Obote izay nitady fialokalofana tany Zambia. Tamin’ny volna Janoary 1986 dia nametraka ny mpitarika azy, Yoweri Museveni, ho filoham-pirenena ny NRA.
Ny fitondran'i Yoweri MuseveniHanova
Fanavaozana ara-pôlitika sy fanitsiana ara-toekarenaHanova
Nanatanteraka fanitsiana lehibe tao Oganda ny fitodram-panjakana vaovao notarihin'i Yoweri Museveni. Nanampy azy ireo betsaka tamin’ny famatsiam-bola ny fikambanana iraisam-pirenana maro tamin’ny alalan’ny fampitrosam-bola sy tamin’ny fanalefahana ny fanefan-trosa. Nanao izay hamelomana indray ny toekarena i Yoweri Museveni. Ireo Aziatika voaroka tamin’ny taona 1972 dia nasainy hiverina any Oganda indray. Nisy ny fandaminana miandany amin’ny fanalalahana izay nikendrena ny fampandrosoana ny fambolena sady natao hisarihana ireo mpampiasa vola avy any ivelany.
Teo amin’ny lafiny ara-pôlitika kosa indray dia nametraka ny firaisam-pirenena tsy anavahana foko tao amin’ny fitondram-panjakana i Yoweri Museveni, nefa nanohitra ny fisian’ny antoko maro izay noheveriny fa tsy mety amin’ny firenena andalam-pandrosoana. Rehefa tsy nosakanany intsony ny fisian’ny antoko maro tamin’ny taona 1992 dia nalalaka ny famerenana indray ny fanjakà-mpanjaka tao Boganda (izay nametrahana teo amin’ny seza fiandrianana an’i Mutebi II) tamin’ny taona 1993. Na dia izany aza dia tsy azoazon’i Yoweri Museveni ny fisian’ny antoko maro, ka noho izany, na dia ekena ao amin'ny lalàmpanorenana lany tamin’ny taona 1995 ny fisian’ny antoko maro, dia io lalàmpanorenana io ihany no nisakana azy ireo tsy hanao na inona na inona.
Lany indray ho filoham-pirenen’i Oganda i Yoweri Museveni tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 1996 izay nahazoany ny 74 %n’ny vato. Nihatsara ny toekarena: voafehy ny fiakaran’ny vidim-piainana, niakatra tsy nisy fijanonany ny harin-karena nanomboka tamin’ny taona 1990. Nisy koa ny fahombiazana teo amin’ny lafiny ara-diplômasia. Izany rehetra izany dia nahatonga an’i Oganda ho isan’ireo firenena filamatra tao amin’ny faritry ny Farihy Lehibe sy Afrika Atsinanana.
Na dia teo aza ny fanavaozana ny fandaminana ao amin'ny tafika, tamin’ny alalan’ny fanakambanana ny tafika ara-dalàna sy ny NRA nanomboka tamin’ny taona 1986, dia nisedra olana ny fitondram-panjakana ogandey. Tao avaratra mantsy dia niatrika ny mpiady anaty akata ao amin’ny Lord’s Resistance Army (LRA) (tarihin’i Joseph Kony) izay fikambanana ara-pôlitika sy ara-tafika mifagaro fivavahana ny fitondram-panjakana. Notohanan’i Sodàna izany fikambanana izany ho setrin’ny fanampiana ataon’i Oganda ny People's Liberation Army (PLA), izay ahitana Kristiana sy mpanaraka ny finoan-drazana animista, ao atsimon’i Sodàna, miady amin’ny fitondrana silamo ao Khartoum. Niteraka fahatapahan’ny fifandraisana ara-diplômasia teo amin’i Oganda sy i Sodàna tamin’ny taona 1995 izany fifanohera’ny pôlitikan’izy ireo izany. Tsy mbola nisy ny famaritana ny fomban’ny fanjakana ogandey na ho firenena tokana tsy mivaky (onitarisma) na ho fikambanam-panjakana isam-paritra maro mizaka tena (federalisma), nefa nanery an’i Oganda ny firenena tandrefana, indrindra i Etazonia, mba hemetrahana ny fahalalahan’ny antoko maro afaka mandray anjara malalaka amin’ny raharaham-pirenena.
Ny fidirana an-tsehatry ny miaramila tany amin'ny Repoblika Demôkratikan'i KôngôHanova
Tamin'ny faramparan'ireo taona 1990 dia nalaza ny ady tao Zaira mpifanolo-bodirindrina tamin’i Oganda. Nanampy an’i Laurent-Désiré Kabila amin’ny fakana ny fitondrana i Oganda sy i Roanda (notarihin’i Paul Kagame) amin’ny fanoherana ny fitondran’i Mobutu tamin’ny volana Mey 1997. I Zaira tamin’izany fotoana izany dia novana anarana ka natao hoe Repoblika Demôkratikan’i Kôngô. Nanomboka tamin’ny volana Aogositra 1998 anefa dia nivadika indray ny raharaha satria nanohana ny fikomiana nanoherana ny fitondran’i Laurent-Désiré Kabila ny andian-tafika avy any Oganda sy Roanda. Taty aoriana, teo anelanelan’ny taona 1999 sy 2000, dia nifanandrina niady koa i Roanda sy i Oganda tao Kisangani ao amin’ny tapany avaratry ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô.
Nohelohin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny mpitondra tao Oganda noho ny nitsabahany tany amin’ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô, ka nihevitra ny hampitsahatra ny ady izay sady mandany vola no tsy nankasitrahin’ny vahoaka. Noho izany dia nanaisotra ny tafiny hiala avy any amin’ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô tsikelikely i Oganda nanomboka tamin’ny taona 2001, ka nanao sonia fifanarahana tsy hiady tamin’io firenena io. Tamin’ny volana marsa 2003 no nandaozan’ny andiany farany amin’ny tafika ogandey ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô.
Fihenjanan'ny fitondrana sy fiharatsian'ny fandriam-pahalemanaHanova
Nanamarika an’i Oganda ara-pôlitika ny nanaovana fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny taona 2000 momba ny fahalalahan’ny antoko maro, izay nolavin’ny mpifidy maro an’isa araka ny sitrapon’ny mpitondra. Lany indray ho filoham-pirenena tamin’ny 69,3 %n’ny vato manan-kery i Yoweri Museveni tamin’ny volana Marsa 2001, raha niampanga ny fifidianana ho feno hosoka i Kiiza Besigye izay avy amin’ny National Resistance Movement (NRM) antokon’ny filoha. Niatrika fanoherana izay nitombo hatrany tao amin’ny RRM ny filoham-pirenena ogandey. Ny ampahan’io antoko io, izay liam-pivoarana, dia nitaky ny fisokafan’ny sehatra ara-pôlitika amin’ny antoko maro sy ny fiadiana mahomby amin’ny kolikoly.
Noteren’ny fianakaviambe iraisam-pirenena hampanjaka ny demôkrasia ny fitondran’i Yoweri Museveni ka nampandany tamin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny volana Jolay 2005 ny famelana indray ny fisian’ny antoko pôlitika maro. Ho setrin’izany anefa dia nampanitsiany ny lalàmpanorenana mba hahafahany mirotsaka ho fidina fanintelony.
Fahalanian'i Yoweri Museveni mifanesy sy fangejana ny fanoheranaHanova
Lany indray tamin’ny 59,3 %n’ny vato i Yoweri Museveni tamin’ny fifidianana natao tamin’ny volana Febroary 2006 izay tsy nahitana hosoka goavana. Tamin’izay dia 37,4 %n’ny vato no azon’i Kizza Besigye izay nirotsaka avy ao amin’ny Forum for Democratic Change (FDC). Indimy lany ho filoham-pirenena i Yoweri Museveni: tamin’ny 1996, 2001, 2006, 2011 ary 2016. Izany fahalaniany izany dia amin’ny fihodinana voalohany avokoa, nefa maro ny miahiahy ny fisian’ny hala-bato.
Nanambara indray ny hanova lalàmpanorenana tamin'ny taona 2017 i Yoweri Museveni mba hanafoanany ny famerana ho 75 ny taona be indrindra ahafaha-milatsaka ho filoham-pirenena. Namorona hetra mahazo ny fampiasana ny tambajotran-tserasera izy. Tamin'ny taona 2018 dia nampanamboriny sy nampikapohiny ny solombavam-bahoaka mpanohitra Robert Kyagulanyi Ssentamu (izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Bobi Wine, izay lasa nitsabo tena tany Etazonia alohan'ny hiverenany ao Oganda indray. Nanameloka an'ilay mpanohitra indray i Yoweri Museveni.
Tantaran'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27i_Oganda&oldid=998364"
Dernière modification le 2 Novambra 2020, à 18:15
Voaova farany tamin'ny 2 Novambra 2020 amin'ny 18:15 ity pejy ity.